Mafokosho — uyo aisvimha misodzi apo anorondedzera mapondero aakaita murume wake, anoudza dare iri kuti pose paaidzika demo kutema murume wake – mushakabvu Vitalis Mudhumo – iye ainge achishevedzera kuti, “Haungadye mari yako inini ndisipo!”Apedza izvi, Mafokosho anoti akatiza ndokunohwanda mubako riri muchikomo chiri kuSakubva, ikoko kwaMutare, kwemazuva mashanu.Ari mubako imomo, anoti akatomboedza kuzviuraya, asi zvikakona.Ndipo paakazofunga zvekuenda kumba kwaamai vake vanogara mubhuku rekwaChigodora, uko kwaakazosungirwa nemapurisa vaimuvhima nemaziso matsvuku.
Mafokosho anoti mushure mekuziva kuti murume wake ainge oda kumusiya achienda kumumwe mukadzi, “mweya wetsvina wakabva wamukunda”.Achipupura mudare, Mafokosho anorondedzera masanganirano avakaita naMudhumo, rudo rwakapisa pakati pavo nekuzodzima kwarwakaita nekuda kwekuti murume wake ainge oda mumwe mukadzi.
“Ini ndakakurira munhamo, zviya zvekusadiwa nenharaunda. Mhuri yemukomana wangu wekutanga yakandiramba ichiti ndinobva kuvarombo. Asi ndakazosangana naVitalis Mudhumo tikadanana muna2015, mushure memwedzi mitatu bedzi tainge tatoroorana.“Ange akanaka murume uyu uye aibatsira mhuri yekwangu pane zvinoda mari,” anodaro Mafokosho, vanhu vaive mudare iri vakangoyeva nekushamiswa.
Anoudza Justice Mwayera kuti mwedzi mishoma varoorana, murume wake akatanga kudanana nemumwe mukadzi.“Murume wangu akatanga kudanana nemukadzi anonzi Edith Marembo (28). Aindiudza kuti Edith ari nani mumachira paneni.“Zvekare, ainditizve waave kudanana naye ane basa rakanaka. Ndizvo zvakandishatirisa,” anodaro Mafokosho.Musi waazopondwa, Mudhumo anonzi akasvika kumba kwavo achida kutora mbatya dzake kuti asiye Mafokosho.
“Ipapo, akatondiratidza mifananidzo waEdith uye mashoko erudo avaitumirana. Aitondishainira, kusvika pakundiudza kuti anotoda kuita mwana naye.” Mafokosho anoti izvi zvakamugumburisa zvikuru, iye ndokutora demo, iro akatema naro Mudhumo mumusoro.Gweta rake, VaChris Ndlovu veGoneso and Ndlovu Legal Practitioners, vanoti Mafokosho akapara mhosva iyi nekuda kwekuti aishungurudzwa munyama nemupfungwa nemurume wake, uyo ainge asisamuratidze rudo.
“Nekuda kwekuti ane mwana anoda kuriritirwa, Mafokosho akasvika pakuomerwa sezvo murume uyu ange ari iye muriritiri wemhuri,” vanodaro VaNdlovu. Justice Mwayera vakapa Mafokosho mutongo wake svondo rapera. Nyaya dzemhirizhonga nekurwisana pakati pevakawanana dzinoratidza kuti dziri kuwanda apo dzevanhukadzi dzinotaurwa nezvadzo asi varume machingokuvarira mukati.